Ụbọchị: 5 August 2019
Mgbe emezuru ezumike nke Eid al-Adha ruo 10, ndị na-eme ezumike malitere ịchọ ụgbọ elu na ọnụ ala. Chọta ebe ndị dị nso na njem ọchụchọ mba ofesi Skyscanner na-enye gị ohere ịchọta ụgbọ elu dị ọnụ ala iji gaa ebe ndị dị nso. [More ...]
N'ime ọnwa mbụ nke 2019 nke 6, Pirelli, onye isi nke ngalaba taya adịchaghị azụ, zụrụ karịa ndị ọrụ 400 gụnyere ndị na-ere ahịa, ndị ọrụ azụmahịa na ndị ọrụ na Adana, Ankara, Bursa, Istanbul, Izmir, Izmit, Kayseri, Sakarya na Sanliurfa. [More ...]
Taa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line
Taa na History 5 August 1935 Fevzi Line Paşa-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na XNUMX na-agagharị na ogidi. a [More ...]